The Irrawaddy's Blog: အွန်လိုင်းထဲရောက်လာတဲ့ မေမြတ်နိုးဓာတ်ပုံတချို့
အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ မေမြတ်နိုး၊ တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက် Miss Asia Pacific World အဖွဲ့အစည်းတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဓာတ်ပုံတချို့ အွန်လိုင်းထဲ ရောက်လာပါတယ်။
ဒီပုံတွေကို ဘယ်သူတွေက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တင်တာလဲ၊ ပုံတွေအားလုံးက အစစ်အမှန်လား၊ ဘယ်တုန်းက ဘယ်မှာ ရိုက်ကူးထားတာလဲ ဆိုတာကတော့ ဘာမှ မသိရပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ ... Miss Asia Pacific World အဖွဲ့အစည်းက သူ့ကို သူခိုး၊ လိမ်ညာသူ လို့ ပြောဆိုခဲ့မှုတွေကို ပြန်တောင်းပန်မှ သရဖူကို ပြန်အပ်မယ်လို့လည်း မေမြတ်နိုးက ပြောထားပါတယ်။
နောက်ပြီး ရင်သားခွဲစိတ်မှုကိုလည်း မပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ မေမြတ်နိုးက ငြင်းဆိုထားတာပါ။
မေမြတ်နိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသက် ကိုလည်း အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ စတင်ကတည်းက အမှန်အတိုင်း ၁၆ နှစ် အဖြစ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကို ဓာတ်ပုံတပုံမှာ တွေ့ရပါတယ်။
နောက်တချက်က ရင်သားအစားထိုး ဖို့ အတင်းဖိအားပေးခံခဲ့ရတယ်လို့ မေမြတ်နိုးဘက်က ပြောဆိုခဲ့ပြီး ရင်သားခွဲစိတ်မှု မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ငြင်းဆိုထားမှုတွေကို စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားနိုင်မယ့် ဓာတ်ပုံလည်း ပါပါတယ်။
အဲဒီ ခွဲစိတ်ခန်းလိုလို၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတခုခုပေးတဲ့အခန်းလိုလိုမှာ တွေ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးက မေမြတ်နိုးနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ သူလည်း ဖြစ်နိုင်သလို တခြားတယောက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုရီးယားမယ်ပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ကတော့ မေမြတ်နိုးရဲ့အလှအပအတွက် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရေးကျွမ်းကျင်သူ ဆယ်ဦးကို အပ်ထားခဲ့တယ်လို့ ပြောထားတာကို http://blog.irrawaddy.org/2014/09/blog-post_62.html မှာ ရေးထားပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူ ၁ဝ ဦး စီစဉ်ထားတယ် ဆိုတော့လည်း ဒီအခန်းဟာ ခွဲစိတ်ခန်း ဟုတ်ပါ့မလားလို့လည်း သံသယ၀င်စရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်ကတည်းက ဖော်ပြထားတဲ့ အလှမယ် ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလှမယ်တဦးချင်းစီ အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်၊ မေမြတ်နိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရေးသားဖော်ပြချက်၊ အသက် ၁၆ နှစ်လို့ တရားဝင် ဖော်ပြထားတဲ့ မှတ်တမ်း စာအုပ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
စားပွဲပုံစံအရ ဆိုရင် ဒါဟာ ဝန်ဆောင်မှုတခုခုပေးတဲ့ဌာနတခုခုရဲ့ ဧည့်ခန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
ဒါက မေမြတ်နိုး နဲ့ သူ့မိခင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
အလှမယ် မေမြတ်နိုးနဲ့ ကိုရီးယားအဖွဲ့ကြား ပဋိပက္ခက အင်မတန် ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးက ငါ့ဘက်က မမှား၊ သူ့ဘက်ကသာ မှားတယ်လို့ ပြောနေကြတာပါ။
ဒီပဋိပက္ခအကြောင်း နောက်ဆက်တွဲတွေ ထပ်လာဦးမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
တရားဝင်တောင်းပန်မှ သရဖူပြန်ပေးမယ်ဟု မေမြတ်နိုး တုန့်ပြန်
Posted in: Celebrity , Eaint Than Zin , Photo , ဓာတ်ပုံ , ဖက်ရှင် နဲ့ အလှအပ
September 5, 2014 at 7:05 PM
She lied. I think Hla Nu Htut would be right.
September 6, 2014 at 10:36 AM
I presume that May Myat Noe's mother is greedy....I saw her greediness on her face. May Myat Noe has been lying because of her mother. Whatever they are accusing to the organzation is groundless. They know what they have done in Korea.
September 7, 2014 at 11:51 AM
Nobody knows about May Myat Noe's operation. The case of giving crown to May Myat Noe is upon to officers of Korean Miss Asia Pacific World. Why did officers gave crown to May Myat Noe even they knew that she is disqualified for crown. She's justaBurmese young girl. Those rich officers should not oppress and insult to May Myat Noe along with this country name: "Myanmar". You, officers have eyes and ears, right?
May Myat Noe should claim and report to Miss Asia Pacific World through Korean Embassy, Myanmar for threatening and humiliating her.
September 8, 2014 at 10:30 AM
September 8, 2014 at 10:32 AM
September 9, 2014 at 11:52 PM
I don't think May Myat Noe is lier, because most of Nurmese girls has their own nature beauty n no Burmese girls needs to do any operations for theirs body repair.Don't be jealous n don't be caus to hers suitable crown.
September 13, 2014 at 2:27 PM
The organizations and hla nu is the bigest lier and both publishing the internal documents of organizations with such childish actions is very obervous. The organizations foce MMN to do such operations and do escort services for business man is must be very true statements. And Hla Nu is not supporting from MMN side to protect but for her business and incomes she is from the organizations site. I would say, very bad organizations and as well as the National Director Hla Nu. Keep it up MMN,
September 14, 2014 at 7:09 PM
The room does not look likeaproper Operation Theater, you can see the improper flooring and the room is not neat and tidy. If you look carefully in that room, there's one person hiding at the other side of the lady, trying to cover his/ her face withapiece of cloth lifting and holding in his/ her hand. His/ her dark blue trousers and white socks were seen below. He/ she has no operation suit wearing, no gown, no mask. Canaperson stay like this in an operation theater? Even the drip set seemed in the wrong place, it is in doubt whether the length of the drip set can reach one of the lady's hands? Could beafake photo, Or if it isatrue photo, I would say, Koreans tried to do the improper operation inasub-standard room. There isaquestion of whether it is legally acceptable, if it isatrue photo? not sure about that.
သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာ၏ကြေညာချက်ကို သရုပ်ဆောင် စိုးသူရဲ့ယခင်ဇနီးဖြစ်သူက ပြန်လည်တုံ့ပြန်
လတ်တလောဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်တွင် ရေပန်းစားနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက တခုအပါအ ၀င်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ စိုးမြတ်နန္ဒာနဲ့ သရုပ်ဆောင် စိုးသူတု...
ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနဲ့ မြိုင်ရာဇာတာတေ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးတော့မည်
ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနဲ့ မြိုင်ရာဇာတာတေ ဇာတ်ကားကန်တော့ပွဲအခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ - ယုမွန်ကျော် / The Irrawaddy) ဒါရိုက်တာ ခင်စောမျိုးရ...
နယူးရီးယား ဒါမှမဟုတ် ပါတီပွဲတွေအတွက် မရှိမဖြစ် အသားကင်စက်
မကြာခင်မှာပဲ နှစ်တနှစ် ကုန်ဆုံးတော့မှာမို့ ရောက်ရှိလာတော့မယ့် နှစ်သစ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ နေလောက်ကြပြီထင်ပါတယ်။ အပြင်မသွားပဲ အ...
“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ အမြဲပြိုင်တယ်၊ စိန်ခေါ်တယ်”
မေဘရဏီ - MTV ဒါရိုက်တာ အသက် - ၂၆ နှစ် ပညာအရည်အချင်း - BA (Eng) ၊ Dip In computer Art ညီမ MTV တွေကို ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးမှုက ၂၀၀...
Sunkist C 500 ဗီတာမင်စီအချိုရည် စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ
Sunkist C 500 ဗီိတာမင်စီ အချိုရည်အကြောင်း မိတ်ဆက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဒီဇင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ်မှ...